भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘नियोकोभ’: कति खतरनाक छ? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home स्वास्थ्य भेटियो कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ‘नियोकोभ’: कति खतरनाक छ?
२०७८, १५ माघ शनिबार १५:३३
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले शुक्रबार नियोकोभ कोरोना भाइरसको बारेमा थप अध्ययन गर्नुपर्ने बताएको छ।चीनका अन्वेषकहरूले दक्षिण अफ्रिकाको चमेरोमा नयाँ कोरोना भाइरस ‘नियोकोभ’ पत्ता लगाएका छन्। अहिले यो भाइरस जनावरमा मात्रै तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। एक अध्ययनमा अन्वेषकहरूले यो भाइरस भविष्यमा मानिसका लागि खतरनाक साबित हुन सक्ने बताएका छन्।
कोरोनाभाइरस विभिन्न भाइरसहरूको समूह हो जसले सामान्य रुघाखोकीदेखि गम्भीर स्वासप्रस्वासमा समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो भाइरस मानिसका लागि खतरनाक छ कि छैन भनेर जान्न थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताएको छ।
डब्ल्यूएचओले भन्यो, ‘मानिसहरूमा लाग्ने संक्रामक रोगमध्ये ७५% भन्दा बढीको स्रोत जनावर हुन्। विशेष गरी वन्यजन्तु यसको ठूलो स्रोत हुन्। कोरोना भाइरस प्रायः जनावरहरूमा पाइन्छ। यसमा धेरै भाइरसहरूको प्राकृतिक भण्डार भएको चमेरो पनि समावेश छ।’ विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो जानकारी साझा गरेकोमा चिनियाँ अनुसन्धानकर्तालाई धन्यवाद पनि दिएको छ।
म्युटेसन भए खतरनाक हुने
अध्ययनका अनुसार निओकोभ कोविड-१९ भाइरस जस्तै मानव कोषहरूमा जोडिन सक्छ। ‘नियोकोभमा एक थप म्युटेसन भए यो मानवको लागि खतरनाक हुन सक्छ। ‘ यद्यपि, यो अध्ययन अझै समीक्षा गर्न बाँकी छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार यो भाइरस मध्य पूर्व रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम (एमईआरएस-मर्स)सँग मेल खान्छ। यो भाइरल रोग पहिलो पटक साउदी अरबमा भेटिएको थियो। मर्स-कोभ भा‍इरसको मृत्यु दर धेरै उच्च छ। यसमा प्रत्येक तीन संक्रमित मध्ये एक जनाको मृत्यु हुन्छ। हालको सार्स-कोभ-२ भाइरस अत्यधिक संक्रामक छ।
मर्स-कोभ भाइरस लक्षणहरूको हिसाबले सार्स-कोभ-२ सँग मिल्दोजुल्दो छ। ज्वरो, खोकी र सास फेर्न गाह्रो पनि हुन्छ। यो रोग पहिलोपटक सन् २०१२ मा साउदी अरबमा भेटिएको थियो। २०१२ र २०१५ को बीचमा, मध्य-पूर्वी देशहरूमा एक प्रकोप थियो। मर्स-कोभ को एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा फैलिएको थियो। जसका कारण धेरैले ज्यान गुमाएका थिए।
Previous articleरत्नेचौरको तोरीबारीमा आन्तरिक पर्यटकको घुँइचो, घुम्न जाने र फर्कनेको भिडले सडक नै जाम (फोटो फिचर)
Next articleबेनी नगरपालिकाको तीन वडा कार्यालय भवन निर्माण